देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीसँग गोप्य छलफल ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीसँग गोप्य छलफल !
सम्झौताको ९ महिना नपुग्दै राजनीतिक समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हटाएर सभापति देउवालाई ल्याउने पहलमा देउवापक्षका नेता नै लागेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पुगेको छ । कांग्रेसका दुई युवा एनपी साउद र चन्द्र भण्डारीले देउवाको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओलीलाई भेट गर्न नेता साउद र भण्डारी निवास बालकोटमा आइतबार साँझ पुगेका थिए ।